အောက်တိုဘာစိပ်ပု တီးလ၊ | Radio Veritas Asia
အောက်တိုဘာစိပ်ပုတီးလကို၊ ရ ဟန်းမင်းကြီးပီအုစ့် (၅) မှ၊ (၁၅၇၃) ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့၌ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ သတ်မှတ်ရခြင်း၏၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာခရူးဆိပ်စစ်ပွဲအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သောလက်ပန်တိုအ ရပ်တိုက်ပွဲ၌တူရာကီများနှင့်ခရစ်ယာန်တို့ကြားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲ၌ အရေးနိမ့်ဖွယ်ကြုံနေခဲ့ရာ၊ စပ်ပုတီး စိပ်၍အမိမယ်တော် ၏ကြားဝင်ထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပေးကိုခံယူ၍ဘုရားရှင်အားတောင်းလျှောက်ရာမှတိုက် ပွဲသည်အောင်မြင်ခဲ့ သည်ကိုအမှတ်ရပြီး၊ ကျေးဇူးတော်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်ရဟန်းမင်း ကြီးကလေးမင်းလက်ထက်(၁၇၁၆) ခုနှစ်၌ ကမ္ဘာပေါ်ရှိကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးသို့အသိပေးကြေငြာလိုက်ပါတော့သည်။
စိပ်ပုတီးစိပ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမူ၏၊ သမိုင်းသည်ရှည် လျားလှပါသည်။ အကြောင်မှာ၊ ဆာလံကျမ်း အခန်းကြီးပေါင်း (၁၅၀) ရှိသည်ကိုအကြောင်းပြုပြီး၊ အစကနဦးဍ်၊ ခရစ်တော်သ ခင်ကိုယ်တော် တိုင်၊ သင်ကြားပေး ခဲ့သောဆုတောင်းစာဖြစ်သည့်၊ ကောင်းကင်ဘုံဆု တောင်းစာကို၊ အခါ (၁၅၀) ရွတ်ဆိုပူဇော်ခဲ့ကြသည်။ ထို့မှတ ဖြည်း ဖြည်းခြင်း၊ အာဝေမာရီးယာဆုတောင်းစာကိုလည်း၊ ထို့အတူ အကြိမ် (၁၅၀) ရွတ်ဆိုခြင်းကိုပြုလာခဲ့ကြပါသည်။ အာဝေမာရီးယာဆုတောင်း စာတစ်ပုဒ်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်း၊ စဉ်းစားထောက်ရှူ့စရာ၊ ယေဇူးသခင်၏၊ သက်တော်စဉ်ကိုဖြည့် ၍၊ ရွှတ်ဆိုလာခဲ့ကြပါသည်။
စိပ်ပုတီးအကြောင်းပြောလျှင်၊ ခြံထား၍မရသောပုဂိုလ်မှာ၊ စိန် ဒေါမိနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာအမိ မယ် တော်က၊ သူ့အားစိပ်ပုတီး ကိုပေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်ပို၍ဝေ၀ဆာဆာဖြစ်အောင်၊ ပြုပြင်ပြောင် လဲပေးခဲ့ကြသူများ မှာ၊ စိန်ဒေါမိနစ်၏အပေါင်းအဖေါ်များဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း တို့အနက်၊ Alan de la Roche ဟုခေါ်သောသူသည်၊ ပိုမိုအား ထုတ် ခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ စိပ်ပုတီး၏တမန်တော် ဟုပင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ ရပါ သည်။ သူသည် (၁၅) ရာစုဍ်၊ စိတ်ပုတီးအ သင်းကြီးကို၊ ပထမဦးစွာဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသည်။ (၁၆) ရာစုသို့ရောက်မှသာ၊ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ရှှတျဆို နေကြ သော၊ ပုံစံမျိုးအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုံစံမှာ ၀မျးမွောကျ ဖွယ်ရာနက်နဲလှစွာသောအချက် (၅) ချက်၊ ၀မျးနညျး ဖွယ်ရာ နက်နဲလှ စွာသောအချက် (၅) ချက်နှင့်၊ အံ့သြဖွယ်ရာနက်နဲလှစွာသောအချက် (၅) ချက်၊ စုစုပေါင်း (၁၅) ချက် ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် (၂၀၀၂) ခုနှစ်ဍ်၊ ရဟန်း မင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်မှ၊ အလင်းတော်၏နက်နဲလှစွာသောအချက် (၅) ချက် ကို၊ ထပ်ဖြည့်ခဲ့ပါသည်။
စိပ်ပုတီးစိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် စိပ်ပုတီးစိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊ ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးခဲ့သော၊ ယေဇူးသခင်၏၊ အံ့သြဖွယ်ရာနက်နဲချက်များကို၊ စဉ်းစား ထောက် ရှူ့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းမင်းကြီး ပီအု(စ်) ကစိပ်ပုတီးကို၊ ဧဝဂေလိကျမ်းစာအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ စိပ်ပုတီး၏အ ဓိကအသားပေးထားသောအချက်မှာ၊ ယေဇူးသခင်၏ သက်တော်စဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်း၏မွေးဖွားခြင်းအကြောင်း၊ သက်တော်စဉ်၊ သေခြင်းနှင့်၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ယေဇူးသခင်သင်ကြားပေးသော၊ မေတ္တာစာကိုရွှတ် ဆိုပူဇော် ခြင်းဖြင့်၊ ယေဇူးသခင်၏ခမည်းတော်သည်၊ ကြှနျုပျတို့ကယျတငျခွငျးကို၊ အစပြုခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ အမှတ်ရစေပါသည်။ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် (ကောင်းကင်တမန်အမိန့်တော်ပြန်သောဆုတောင်းစာ) ကိုရွှတ်ဆိုပူ ဇော် ခြင်းဖြင့်၊ အမိမယ်တော်သည်၊ နက်နဲသောမိမိ၏သားတော်နှင့်၊ လောကအသက်တာဍ်သော်လည်းကောင်း၊ နီးနီးကပ်ကပ်ပေါင်းစပ် ခဲ့ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ ကောင်းကင်ဘုံဍ်လည်း၊ ပေါင်းစပ်နေကြောင်း ကို၊ အမှတ်ရစေပါသည်။ ထို့အတူပုဂိုလ်သုံးပါး၊ တစ်ဆုဘုရားအား ဂုဏ် ပြုသော၊ ဂလိုရီယာပါးတြီးကိုရွှတ်ဆိုခြင်းသည်လည်း၊ ကြှနျုပျတို့ခရဈ ယာန်အသက်တာတစ်ခုလုံး၏၊ နေထိုင်၊ လုပ်ဆောင်၊ အသက်ရှင်ခြင်း သည်၊ ပုဂိုလ်သုံးပါး၊ တစ်ဆုဘုရား၏ဘုန်းဂုဏ်တော် အတွက်သာဖြစ် ကြောင်း၊ တရားရစေပါသည်။
စိပ်ပုတီးစိပ်ခြင်းဖြင့်၊ အကြောင်းအရာများစွာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါ သည်။ စိပ်ပုတီးစိပ်ခြင်းသည်၊ ရိုးရှင်းပြီး၊ စာဖတ်တတ်သူ၊ မဖတ်တတ်သူ များလည်း၊ အလွယ်တကူရွှတ်ဆိုပူဇော်နိုင်ပါသည်။ မေတ္တာစာတစ်ပုဒ် တည်းကို၊ ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လည်ရွှတ်ဆိုခြင်းဖြင့်၊ ဘုရားရှင်၏ နက်နဲ သော၊ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတော်ကိုပို၍သိရှိလာရပါသည်။ စိပ်ပုတီး စိပ်ခြင်းဖြင့်၊ ယေဇူးသခင်နှင့်၊ အမိမယ်တော်သည်၊ ကြှနျုပျတို့ နှင့်အတူ၊ ဘ၀၏ပျော် ရွှင်ချိန်မျာဍ်ဖြစ်စေ၊ ၀မျးနညျးခြိနျမြာဍျဖွဈစေ၊ ရှိကြောင်းအ သိ ရှိစေပါ သည်။ ထို့အတူ၊ ဘုရားရှင်သည်၊ ယေဇူးသခင်နှင့်၊ အမိမယ် တော် တို့အားပေးသနားခဲ့သော၊ ဘုန်းစည်းစိမ်တော်ကို၊ ကြှနျုပျတို့အား လည်း၊ ထာ ၀ရပေးမညျဟု၊ ယုံကြည်၊ မျှော်လင့်ချက်များ တိုး ပွားများပြာ လာစေပါသည်။
ကိုးကားချက် စိပ်ပုတီးစိပ်ခြင်းသည်၊ အမိမယ်တော်အားဖြင့်၊ ဘုရားရှင်ထံ တိုင်တည်သည်ဆိုသော်လည်း၊ အမှန်မှာယေဇူးသခင်ကိုသာ၊ တိုက်ရိုက် တစ်မျိုး၊ သွယ်ဝိုက်တစ်မျိုး၊ ဦးတည်ညွှန်းဆိုဖေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းဆုတောင်းစာတစ်ခုလုံးဍ်၊ ဧဝဂေလိကျမ်းစာမှ၊ တရားများကိုတွေ့ ရ ပါသည်။ အမိမယ်တော်၏၊ ၀မျးကွာသိုကျဍျ၊ လူ့အဖြစ်ကိုယူခြင်းဖြင့်အ စပြုခဲ့သော၊ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို၊ ချီးမွမ်းကျုးရင့်ထားသော၊ အ မိမယ်တော်၏ဆုတောင်းပဲ့တင်သံဖြစ်ပါသည်။ စိပ်ပုတီးဆုတောင်း စာ သည်၊ တနည်းအားဖြင့်၊ ဗာတီကန် (၂) ၏၊ စာတမ်းများအနက်၊ နောက် ဆုံးအခန်း၏အဓိပ်ပါယိဖွင့်ဆိုချက်​ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အဆိုပါအခန်းဍ်၊ ခရစ်တော်နှင့်၊ အသင်းတော်၏နက်နဲချက်ဍ်၊ ထူဆန်းစွာ တည်ရှိနေသော၊ ဘုရား၏မယ်တော်ကြောင်း၊ တင်ပြဆွေးနွေး ထား သောကြောင့်၊ ဖြစ်ပါသည်။ (ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်၏ မယ် တော်မာရိ ယာ၏စိပ်ပုတီးတော် စာချွန်တော်မှကောက်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
မှတ်ချက်။ ။စိပ်ပုတီးမိသားစုအဖွဲ့ (The Living Rosary) ကိုဖွဲ့ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ယ နေ့တိုင်မပျက်မကွက်စိပ်နေ သောဤအဖွဲ့ကိုစိပ်ပုတီးလ တွင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
Crd! Fr. ClePike